“Cadhadii aan Balligubadle ka cadhooday ayaa halkaa ila gashaye Saw Waxaan Illoobaba Haddana Wax Ima Xasuusiyaan!!!!,” | Hubaal Media	Home
HUBAALMEDIA.COM “Cadhadii aan Balligubadle ka cadhooday ayaa halkaa ila gashaye Saw Waxaan Illoobaba Haddana Wax Ima Xasuusiyaan!!!!,”
Akhri: Cali-Gurey Oo Qormo Dheer Ka Qoray Xasuusta Sawir Ku Beegnaa Xilli Uu Ahaa Sarkaalka Wardoonka Ee SNM
“ Baligubadlle Iyo Shirka Calacastu Maamulanayo Hadduu Shir Wanaagsan Oo Daacad Laga Yahay Noqon Lahaa Saw Kaambaynka Dhinacayga Kamaan Galeen….”
“Cadhadii aan Balligubadle ka cadhooday ayaa halkaa ila gashaye Saw Waxaan Illoobaba Haddana Wax Ima Xasuusiyaan!!!!,”
Sawirkani waa Shirwaynihii 5aad ee Baligubadle. Dhawr maalmood ka hor intii aanu furmin Shirwaynuhu ayaa waxa SNM laga qabsaday Zaylac iyo Tokhoshi. Warka ayaa aniga oo markaa ahaa Sarkaalka Wardoonka Iyo Nabadgelyada ayaa isla maalintiiba aan ogaaday. Subax ayaa Baligubadle ka soo dhaqaaqay Axmed Silanyo oo ahaa Gudoomiyaha Xisbiga ayaan kula kulmay Harar aniga oo sii gelaya Eastern Command-ka isna uu ka soo baxay uu Baligubadle ku sii jeeda. Gudida Qabanqaabadu waa 15 xubnood oo mucaarid ah oo is naqaystay waxa Gudoomiye iyo Gudoomiye xigeen isu ah Maxamed Xaashi Cilmi iyo Allah ha u naxariisto eh Cismaan Aden Dool- Quule. Ergedana iyaga ayaa qaybiyay cidda ay aaminsan yihiin baana xulaysa. Taagnida ayaan ugu waramay Gudoomiyaha in Shirwaynuhu yahay madal isaga lagu shirqoolayo ergo mucaarku soo xushayna meesha la keenayo oo xataa Shirgudoonku qorshaysan yahay. Wuxu markaa isagu ka yimi debedda oo muddo ayuu maqnaa intii la shaqaysanayay. Adugu hadal waxan ugu soo gebogebeeyay in aan wax meesha u yaalaa jirin. Ilaahow adigaa ka markhaati ah wuxu iigu jawaabay” waar cidday doonaan ha keenaan eh saw dadka la hadli mayno oo la ina dhegaysan maayo. Marka aynu dadka u warranno ee la ina dhegaysto arinku siday moodayaan noqon maayo oo kufurtu bilaahi in aanay hebel dooranayn oo Gudoomiye noqon doonin eh ina Celi” weger baan idhi anigu nimaankii aan arkayay Shir ay maamulanayaan ugu tegi maayo. Tan kale saw in xeebtii galbeedka la inaga qabsaday ma ogid? Haa oo hadda ayaaban kala hadlayay Jananka oo waxaabay garan la’ yihiin meel uu cidankii dhamaa jaan iyo cidhib dhigay markaa malaha waanay soo gaadhin eh xaga xadka meel aan ahayn oy u bixi karaan miyay jirtaa? Suaashii aniga oon uga jawaabin ayaan u waydaartay Taliskii Eastern Command-ka. Waxan toos u abaaray Xafiiskii Sarkaalka Wardoonka iyo Sahanka oo waa kii uu beryaha qaar fadhiyi jiray ninkii libaaxa ahaa Col. Amiin oo ahaa khabiir ku xeeldheer arimaha Wardoonka Ciidanka Somaliana Raas Kambooni ilaa Lawyocaddo siduu u qaybsanyahay aad fajacaysay. Lakiin nasiibdarro waa markii ay dayuuraddu la dhacday ee uu ku dhintay oo ma noola cidda markaa aan garanayay oon ku hagaagayayna ma jirto. Markii aan Xafiiskii Imaam galay waxan u tegay sarkaal hoose oo laba xidigle ah. Markaan isu sheegay ayay intay neefi ka soo booday ayuu yidhi ” meel aanu idin kala soo xidhiidhno ayaanu waynay war baanu idinka doonaynay eh bal iiga warran xaaladda ciidankiinii waan maqlay in xeebtii la idinka qabsadaye? Bun horyaalay ayuu ku jeedsaday inu ii shubo koob. Intii baa fursad aan jawaabta sua’aashiisi ku doono ii noqotay. Arkayna in Sarkaalku uu geb yahay wax fikrad ah ka haysanin xaaladda dhulkana waxba ka aqoonin.